Maitiro ekutarisa iro bhatiri nhanho yebluetooth keyboard uye mbeva yeMac yedu | Ndinobva mac
Iko kusununguka uko makhibhodi ebhuruu nemakonzo anotipa kana tichishanda zvakakura. Dzakaenda nguva idzo dzataifanira kuisa mbeva nekhibhodi tambo parutivi kana kuseri kwechigadziri kuti tikwanise kushanda tisina kuomesa tambo, kunyanya kana tiri vashandisi vanofarira kufambisa zvese keyboard nembeva kuti vazvigadzirise chinzvimbo chatiri kunyanya kugadzikana. Asi hazvisi zvese zvakanaka kunyanya kana isu tisingawanzoshandisa mabhatiri anodzoreredzwa eiyo keyboard uye mbeva, sezvo vachigara vachida kupera kana hwava husiku kana pazororo uye tinogona kukanganwa kusvika zuva rinotevera rekutenga mabhatiri.
Ini ndinonyanya kushandisa iyo yeMagetsi Khibhodi uye Magetsi Mouse, ese maviri ekutanga chizvarwa. Tichifunga nezvekuti ini ndinoshanda rinenge zuva rese neMac, ini ndinogara ndichifunga nezve mamiriro ebhatiri emidziyo miviri kudzivirira kupererwa nemabhatiri pandinenge ndichida zvakanyanya. Default, OS X inotinyevera kana bhatiri danho ratanga kudonha zvinoshamisa zvekuti tinorangarira kusaina muchiyeuchidzo app chedu kuti tinotenga mabhatiri. Asi senguva dzose, isu tinowanzo kurasa meseji kusvikira nguva inenjere yasvika.
Tarisa mamiriro eiyo keyboard uye mbeva mabhatiri paMac
Kune avo vakaita seni, avo vanowanzodzinga iyi meseji, tinogona kusarudza sarudzo yekutarisa nguva nenguva, zvirinani mazuva ese, mamiriro emabhatiri emidziyo miviri kuburikidza nemenu bar. Kuti tiite izvi, kutanga pane zvese zvatinoenda Sarudzo dzeSystem> Bluetooth.
Ipapo zvishandiso zvatakabatana neMac yedu zvinoonekwa.Pazasi tinofanira kutarisa bhokisi Ratidza Bluetooth mumenu bar.
Nenzira iyi tinogona kukurumidza kutarisa mwero webhatiri nekudzvanya nezvebluetooth icon uye kutsvedza mbeva kuchinhu chiri kutaurwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Tutorials » Maitiro ekutarisa iro bhatiri nhanho yebluetooth keyboard uye mbeva yeMac yedu
Samsung vs Apple pamberi peDare Repamusorosoro zvakare